Top 10 Nasteexo Digitize 8mm Videos
Waxaa jira sababo badan oo ay u badalaan cajalado 8mm aad files digital galay, way fududahay in la wadaagno, hawl yar in uu kaydiyo iyo xal u helidda dhibaatada xaalufka in dhexdhexaad cajalad dhibaato ka, laakiin waa halka habka dhabta ah ee helitaanka video ka cajalad qaab digital on your computer waxaa si caddaalad ah mid sahlan, helitaanka natiijooyinka ugu fiican ee geedi socodka ma aha. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ay u samaynta Hubi in files digital tiirsanaayeen xasuus iyo dhacdooyinkii qabsaday film ee ugu tayada sareeya suurtagal ah si loo xaqiijiyo in la daawado ahaanshaha sii.
1. Hubi in qalabka qabashada iyo fiidiyo si fiican u xiran.
Tani waa muhiim si loo hubiyo in aadan ku dhumin waqti badan, sida caadiga ah aad ka arki kartaa haddii video waxaa si fiican u xiran in software qabashada, sababtoo ah waxaa image video ah, laakiin haddii aad wax aniga oo kale, waxaad leedahay codka cajuusada ah marka sameeyo waxyaalaha caynkaas ah, si aan helitaanka isku xirka audio midig si fudud ku seegay karo. Samee laab hubiyo in ay connecters audio si buuxda ammaan, gaar ahaan haddii aad isticmaalayso RCA in 3.5mm fur adapters iyo wixii la mid ah, waxaad badbaadin kartaa saacadood oo basement aamusan video files.
Tayada 2. File
Tani waa doorasho ugu weyn ee hanaanka digitizing aad, files uncompressed waa kuwo waaweyn, oo ku saabsan 13GB halkii saac oo cajalad, halka lagu kaydiyo waa maalmahan jaban, haddii aad leedahay maktabad weyn oo videos kuwaas waxay noqon kartaa arrin. Isticmaalka riixo kasta video files ayaa saamayn xun ku tayada kama dambaysta ah ee video file in ay soo saartaa, oo sidaas darteed waa muhiim in taxaddar nooca aad doorato haddii aadan ka dusin la files uncompressed saldhig. Wixii xaaladaha ugu, MPEG-2 ee bitrates ee 4000 ama ka badan wax soo saarka files of size macquul ah - oo ku saabsan DVD ah (4GB ama si) halkii saac oo footage - inta la ilaalinayo tayo sare leh video dhamaadka.
3. Archiving faylasha
Marka aad qabtid aad files digital, jirrabaadda waa in si fudud iyaga loogu badalo in ay DVD iyo illoobin ku saabsan, laakiin tani waxay sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin xusuus aad khasab ma aha. Tani waa run gaar ahaan haddii aad u tagto si dhib ah ee qabsaday qaab in uncompressed, waxaad u baahan doontaa in aad sii files kuwa ammaan ah.
Archiving file asalka, badanaa loo yaqaan odayga, wax kasta oo qaab aad u abuuray, waa waxqabadka wanaagsan, aad ku raaxaysan kartaa DVD ee aad la abuuro waxa ka, laakiin hayo asalka aad ku disk adag, waxaa suurtagal ah la nuqul raad raac kale drive, hubisaa in files yihiin ammaan ah oo aad cilinta kartaa DVD in mar kasta oo wax dhacaan waa in si.
4. Digital 8 kaamirada
Haddii aad qabto Digital 8 fiidiyo aad u isticmaali kartaa in aad aqbasho jira faylasha 8mm qaab digital xitaa fudud, si fudud u xidhi ilaa PC la fiilooyinka bixiyo, files ayaa wax soo saarka ee DV qaab AVI taas oo sameecadda ah oo ka mid ah meelaha ugu sarreeya oo tayo leh. Doorashadan waxa uu yahay mid waxtar leh oo keliya haddii aad horey u fiidiyo Digital8 ah, cad, si kastaba ha ahaatee waa hab aad u sahlan oo fudud si aad u hesho faylasha aad u gal kombiyuutarka, sidaas darteed haddii aad u baahan tahay si ay u iibsadaan qalabka si ay u qabtaan, fiidiyo la isticmaalay digital8 noqon kartaa macquul ah.
5. Tafatir videos
Marka aad ku badaley files si aad u digital, waxayna ku xiran tahay waxa software aad isticmaalayso si ay u sii melo ay gubaan in DVD iyo wixii la mid ah, waxaa laga yaabaa inaad fursadaha tafatirka, ama heli karo software tafatirka takhasus iyo sidoo. Halkan waxaa muhiim ah in ay ka faa'iidaystaan ​​tan, waxaad ku waayi kartaa clip in marka aad illoobeen inay noqon fiidiyo ah off iyo halaagsameen 6 daqiiqo ah footage aad kabaha, waxa aan la seegay! Haddii aad isticmaasho caaradda archiving kor ku xusan, waxaad dabcan karaan, sii footage dhawrsan ee file sayidkiisa aad, laakiin markii gashan gal DVD ama qaab kale si aad u tusto dadka kale, isku day iyo edit oo dhan khaladaadka, waxaana had iyo jeer irrelevancies aakhirka Qabsashada. Ma aha oo kaliya badbaadin doona inta DVDs ayaad u si ay u gubaan isagoo, waxaa ka dhigi doonaa waayo-aragnimada aad u arkaysid wax ka badan raaxo leh.
Dad badan ayaa aaminsan in loo dhoofiyo iyaga u gaar ah video 8mm waa iyaga ka baxsan oo ay dooneyso in ay shirkado ku takhasusay si ay iyaga u sameeyo, taas oo inta badan waa wax qaali ah. Waxaa xusid mudan baadhitaan sida ay fududahay in la isticmaalo, yar iyo weynba kharashka ah, hardware loo baahan yahay si loogu badalo cajalad si digital run ahaantii waa, in adduunka maanta intooda badan oo naga mid ah ay heli karaan kombiyuutar badan ee xawaaraha iyo kaydinta, si fudud u awoodaan inay xamili nidaamka, si hor casaan aad ka tuullan cajalado, si fiican oo qiimihiisu yahay eegno yar ee kharashka ay u qabanayaan naftaada. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay.
7. Ka sii fikir
Haddii aad ku talajirto in gelinaya oo dhan files gediyay gal DVD la daawado, hubi in files yihiin in xalka ku habboon, in aad software kuu ogolaanaysaa inaad soo qaado in ka badan ama ka yar oo isku jira mid ka mid ah heerka jir iyo xallinta aad rabto, si kastaba ha ahaatee, haddii aad guriga video nidaamyada ku salaysan yihiin NTSC, ka dibna ay isticmaalaan qaab NTSC ku saleysan si aad u MPEG-2 files in lagu bilaabo, isku mid haddii aad qabtid qalabka Pal, u isticmaalaan goobaha Pal, waa mid ka mid kaliya wax ka yar si wax looga qabto dib on.
8. Ha ka baqin inaad la qabsato faylasha aad
Marka aad haysato versions cusub digital ah ee video, iyaga ciyaaro. Eeg waxa ay u eg qaab ay marka hore ka jira, maadaama ay tani tahay waa file ugu sareeya tayo leh waxaad yeelan doontaa iyaga ka mid ah mar kasta. Save nuqul Archive, laakiin haddii uu jiro wax aadan ku faraxsanayn, ha ka baqin in ay qabsadaan. , Xitaa kuwa maanta intooda badan software tafatir ah oo lacag la'aan ah, u ogolaadaan inaad la qabsato nashaadka midabka iyo tonality, ay xitaa ku siin karaan xal waayo, hadhuudh ama dhalanrog laga yaabaa in aad wax arkaya. Ka hor inta gelinaya filimada, kuwaas oo ka soo baxay dadka kale u arkaan, isku day oo waxaan ka dhigi eegto ugu fiican ee ay noqon karaan. Ka dhig archive for asalka ah hadii aad rabtid in aad, laakiin mid ka mid ah faa'iidooyinka dhexdhexaad ah digital waa awood u leh inay dantooda midabada iyo dhinacyo kale inay u hagaajiyo, si fudud oo si deg deg ah. Ha is illowsiin wejigaas oo ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah waxa aad samaynaysid.
9. Ku dar horyaal si aad DVD ee
Marka gelinaya clips aad u gal DVD ah oo loogu talagalay dadka si loo eego, ha iloobin in aad ku darto horyaal oo qaar ka mid ah si ay u DVD ah, in dadka fahmaan waxa ay arkaya. Dhamaan laakiin software ugu aasaasiga ah diyaar u ah diinta aad video files galay DVD ah in la ciyaari karo meel kasta oo uu awood u leeyahay in la abuuro horyaal oo fudud oo ku dheggan u qeybaha kala duwan ee DVD ah, tani waxay u oggolaanaysaa daawadayaasha si aad u aragto meesha clip kasta ka yimid, wakhti, meel , kuwaas oo ku dhex jirta, taas oo si gaar ah faa'iido u tilmaamay xubnaha qoyska ama asxaabta ee clips ka weyn in laga yaabo in idlaadeen ama taabashada kaliya laga badiyay sanadihii la soo dhaafay.
10. Ku dar Sound qaar ka mid ah
Haddii aad raadinayso ee stock badan ka weyn, waxay u badan tahay in uu leeyahay dhawaaq jirin oo dhan, haddii ay taasi waa fikrad wanaagsan in wax lagu daro in clips mar aad haysato on your computer. Waxaa jira, ka dib oo dhan, ma click-click ee borojektar sida soundtrack marka aad raadinayso ee files digital! Ku darista in music qaar ka mid ah, qoraalana voiceover ama wixii la mid ah waa hab fiican in lagu daro qaar ka mid ah xiiso dheeraad ah oo aad ku footage gediyay, oo sida la horyaal, software ka dhigayaa mid aad u fudud in la sameeyo.
Top 36 Twerk, Qoob ka ciyaarka, Xoolaha iyo Saamaynta Gaarka canabka Videos
Sida loo sii qulquli Video Local in Chromecast ka Windows / Mac / Android / macruufka
Sida loo qabsaday Streaming Video
> Resource > Video > Top 10 Nasteexo Digitize 8mm Videos